Valin-kafatra politika tao Fianar - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nafampana ny fanehoan-kevitra politika teto Fianarantsoa tamin’ny faramparan’ny herinandro lasa, ny faha 12 sy 13 martsa 2021. Raha fintinina manko ny nambaran’ny mpanao politika iray Atoa Rakotoniaina Pety dia mampiseho fa tsy araka ny nantenain’ny vahoaka ny ataon’ny mpitondra ny firenena ankehitriny. Nitondrany fanazavana fa tsikaritra tamin’ny fomba nitantanana ny volam-panjakana izany satria tsy mangarahara. tsy nampahafantarana ny marina tamin’ ny fandaniana ny olom-pirenena. Ny fitsinjarana ny fanampiana isan-karazany na ny teto an-toerana na ny avy any ivelany, tsy niantraika amin’ny vahoaka akory hoy hatrany izy fa vao mainka aza mahantra ny ankamaroany. Nambarany ny tsy fahalalan’ny mpitantana amin’izao fotoana izao ny laharam-pahamehana ho an’ny Malagasy sy tsy mijery ny sosialim-bahoaka ,ny fotodrafitr’asa tsy dia ilaina no mahamaika azy. Tsy izany ihany,namafisiny ny tokony hahafahan’ny olona maneho hevitra an-kalalahana eo anatrehan’ireo voalaza. Zava-misy anefa asain’ny mpitondra miandry ny fahataperan’ny fepotoam-piasany ny vahoaka fa tsy avela mihetsika. Fanehoan-kevitra nataon’Atoa Rakotoniaina Pety raha nivahiny tamina onjam-peo iray teto Fianarantsoa izy ny Zoma 12 Martsa 2021.
Nisongadina tamin’ny kabary nataon’ny olon’ny fitondrana kosa ny valin-kafatra niantefa tamin’ny mpanohitra. Nisy ny fanentanana politika nandritra ny fety fifampiarahabana tratra ny taona teo amin’ny antoko T.G.V Mapar Fianarantsoa. Notanterahina tao Kianjasoa ao amin’ny Seminera Zandriny ny asabotsy 13 martsa 2021 taorian’ny fiarahana namboly hazo.
Miantso fampitsaharana ny fanaratsiana ny mpitondra ankehitriny ny solon-tenan’ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry. Nambaran’izireo fa miharihary ny zava-bitan’ny mpitantana ny firenena ankehitriny anefa vao roa taona niasana. Miavaka izany manerana ny Distrika eto Madagasikara ary anisany i Fianarantsoa. Aoka izay ny fanasoketana ny Filoham-pirenena Rajoelina Andry, avelao ny vahoaka no hitsara amin’ny taona 2023 fiafaran’ny fe-potoam-piasany. Nampiaka-peo I Raymond Nala, Senatera voafidy teto Fianarantsoa sady mpitondra tenin’ny Antenimieran-doholona fa voafidim-bahoaka ara-demokratika ny fanjakana mijoro ankehitriny ka tsy hizara fahefana amin’ny mpanohitra velively, ndao hoy hatrany izy hifaninana amin’ny fampandrosoana sy ny fitiavan-tanindrazana. Nanentanana ny vahoaka ny firaisan-kina, ny fampitambarana ny hery hanatanterahana ny fampandrosoana satria betsaka manam-pahaizana I Fianarantsoa. Eo ihany koa ny tokony hiarovana ny safidin’ny maro an’isa nametraka ny fitokisana amin’ny fanjakana ankehitriny, mandrapahatonga ny taona 2023.